Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Business Directory » Abahambisi bokuPhucula iKhaya » US » J & M Uphahla kunye noKwakha1
Uhlaziyo lokugqibela 2019-10-31
:: :: :: www.jmconstructionok.com
Inombolo yelizwe:: 74464
SiyiKontraktha yosapho ngokubanzi eneminyaka emininzi yokwakha amakhaya esiko kunye nesakhiwo seposi (pole barn). Siziindawo zokuhlala ezinobuchule nezokuthengisa uphahla ezisebenza ngokuhlaziya kunye nokubaza.
Ukuphakanyiswa kwiinduli ze-Ozark ntle nje kweChibi iTenkiller, siyinkampani yokwakha neyokwakha eneminyaka engaphezu kwama-20 yamava kunye nobuchule kwiindidi ezahlukeneyo zezakhiwo.
Siyazingca ngayo yonke imisebenzi yethu kuba siyakuqonda ukubaluleka kokugcina ingqibelelo kwiidolophu zethu nakwizixeko ezise-Oklahoma. Udumo yinto yonke ejikeleze iTahlequah kwaye yiyo loo nto sithatha ukhathalelo olukhethekileyo ukuya kwisentimitha yesakhiwo ngasinye.
(918) 931-xxxx bonisa
Nxibelelana nentengiso (918) 931-xxxx
Ukulungiswa kweNdawo yeGaraji eTemecula, eMurrieta, eMenifee, eSan Diego, Winchester, Elsinore, eCanyon Lakes, eFallbroo
UkuSuswa kukaYorba Linda Junk
UkuSuswa kwe-Mission Viejo Junk